QALABKA ADIANTUM (TIMAHA VENUS): XEERARKA DARYEELKA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Adiantum: sida loo daryeelo feerka guriga
Adiantum - Dhirta quruxda aan caadiga aheyn, taas oo lakulmaysa nimcada, maaha mid u eg cayayaanka kale.
Laakiin si ay ubaxu kuugu farxaan adiga iyo dadka aad jeceshahay, waa inaad ka taxadartaa, iyo adantumku waa wax xamaasad leh.
Haddii aad u yartahay noocyada qaar ka mid ah ferns, markaas waxaad ku heshiin doontaa in adantumku yahay dhirta ugu jilicsan iyo dhirbaaxada leh oo dhan laga bilaabo dhammaan noocyada ferns. Caddeynta tani waa xaqiiqda ah in warshadani ay inta badan isticmaasho ubaxlayaasha.
Ma taqaanaa? Ugu horreyn, ferniga waxaa loo isticmaalay bouquets arooska, sida la aaminsan yahay in ay keeno dumarka farxad.
Inkasta oo, dabcan, waxaa fiican in la isticmaalo fermo sida guri xajmiga ah ee dheryaha, halkii ay ka samaysan yihiin qurxinta ee bouquets. Xaqiiqdu waxay tahay in caleemaha la gooyey ay si deg deg ah u engegaan: aad uga dhaqso badan qaybaha kale ee bouquet.
Caleenta qaabaysan waxay u egtahay mid aad u qosol badan, iyo midabkeeda casiir leh oo casaan leh waxay siin doontaa qolkaaga qoloftaada iyo xagaaga xitaa maalinta jiilaalka ugu qabow badan.
Adiantum waa fern-dilka ah. In height, waxay gaari kartaa 60 cm, iyo mararka qaarkood xitaa ka sareeya. Rooti dillaaca iyo kicinta. Petioles ayaa inta badan le'eg celcelis ahaan 13 cm, waxay leeyihiin dusha sare.
Devalia, asplenium, poleniadnik, pteris, pelleya, tsirtomium, platicerium, iyo sidoo kale adistum, ayaa ka mid ah noocyada ugu caansan ee ferns, kuwaas oo badanaaba ku jira taraafikada iyo subtropics.
Taajka cagaarka cagaaran (sawirka fermuska hoose) ayaa ku farxi doona indhaha haddii aad si fiican u daryeeshid geedka. Daryeelka guriga ee adistumku wuxuu u baahan yahay dadaal: waxaad u baahan tahay in aad biyo, qoydo, buufin, nafaqo iyo jarjar.
Qoyaanka iyo heerkulka
Dhirta intooda badan ma fiiriyaan waxyaabahan oo kale sida qoyaanka, laakiin tani ma khusayso adantum. Haddii aadan u hoggaansamin talooyin gaar ah, markaa waligaa ma taaban kartid saameynta caleemaha caleemaha iyo helitaanka midab cagaaran oo dhalaalaya - kuwanuna waa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee fermiska.
Qoyaanku waa inuu sarreeyaa: aan ka yarayn 60%, waana fiicantahay in qiimahaasi uu gaaro 70%. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu gaaro waxtarkaas. Qaar ka mid ah guriga ayaa qoyan, halka kuwa kale, ay ka soo horjeedaan, hawo qallalan oo qallalan, iyo haddii aad ka mid tahay qaybta labaad, waxaad ku ridi kartaa dhirta naftaada.
Qoyaan badani waxay u baahan tahay in la ilaaliyo wakhti kasta oo sanadka ah.
Waa muhiim! Inta lagu jiro xilliga kuleylka, geedka ka fogow batteriyada iyo qalabka kale ee loogu talagalay in lagu kululeeyo hawada.
Daryeelka Adiantium ee guriga waxaa ka mid ah arrin kale oo muhiim ah: iftiinka waa in uu ahaadaa mid dhexdhexaad ah, si fiican u kala firdhisan.
Waa muhiim in la raaco sidaas timaha gabadha ma jirin qorax kulul Raajooyin iftiin leh isaga ayaa burburinaya. Waxaa ka wanaagsan inaad dooratid woqooyi ama daaqad baran si aad ugu dhejiso dhoobo leh ubax.
Haddii aad weli rabto in adiguumku qolka ka soo galo dhinaca koonfureed ama dhinaca galbeed, markaa kiiskan waa inaad ugu yaraan dhigtaa daaqada, laakiin qoto dheer qolka. Ka saar dusha sare ugu yaraan saddex mitir.
Guga, subaxda iyo fiidkii, qadar yar oo qorrax ah ayaa loo oggol yahay, maalinti kulul, waxaa fiican in dhar gashato qayb ahaan.
Xilliga qaboobaha, ferna nalalka dheeraadka ah looma baahna.
Ciidda loogu talagalay warshadani waxay ku haboontahay oo kali ah, iyada oo la taaban karo gaar ah. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato taas dheriga fernuhu waa inuu ahaadaa mid ballaaran maadaama ay leedahay nidaam xidid faafin.
Samee isku dhafan dhuleed ee qaybaha soo socda: dhulka caleen, peat. Saamiga ugu wanaagsan ee qaybahaas waa hal mid.
Tani waa xulashada ugu wanaagsan ee nooca warshadda lagu soo bandhigay. Waa suurad wacan, laakiin maaha lagama maarmaan, si loo daro ciid, bacrimiya-ku jirta bacriminta dhulka, iyo sidoo kale dhuxul la jajabiyey, kaas oo lagu sameeyay gubasho gubanaya.
Inta lagu jiro daryeelka, si joogto ah u hubso in ciidda ee xididka laftiisa uu dabacsan yahay, waa inay lahaadaan kartida sarreeysa ee biyaha.
Warshadu waxay kobcisaa laba siyaabood: kala qaybinta baadiyaha iyo khilaafaadka. Adiga ayaa dooran kara, waxaan kuu sheegaynaa kaliya faa'iidooyinka iyo khasaarihiisa mid kasta oo ka mid ah si loo fududeeyo doorashadaada.
Doorashadani waxay ku habboon tahay in ay u tarmaan cunuqaadka jirkoodu yahay mid ku filan, xittaa sidaas oo kale waxay horay u lumiyeen tayada suuxinta.
Ma taqaanaa? Laga bilaabo magaca Laatiin ee ubaxa waxaa loo turjumi karaa "ma helin qoyan." Magaca ferna wuxuu u sabab ahaa awoodda ah in uu sii wato qalalan xitaa ka dib markii uu soo gaadhay biyaha.
Hannaankani waa in lagu soo dhawaadaa daryeel weyn, sababtoo ah haddii wax khaldan yahay, markaa kaliya ma heli doontid dhir cusub, laakiin sidoo kale gebi ahaanba burburin kara kan hore. Intaa waxaa dheer, heerka noolaanshaha qaybaha cusub ma aha mid aad u sarreeya.
Samee habka guga. Waxaad u baahan tahay inaad feeraha ka soo qaadatid dufanka si taxaddar leh, oo ay weheliso xididka. Marka xigta, xididka ayaa laga nadiifiyey dhulka ku sii jirey, ka taxadar inaadan jeexin xididada yaryar.
Diyaarso mindi la duubay, waa muhiim in ay tahay nadiif. Si taxaddar leh u kala qaybso rhizome laba qaybood ama kabadan si qayb kasta u yeelato hal (calaamado badan) caleen caafimaad leh.
Horudhac dhulka hore, qaado nooc ka mid ah weelka ama dheriga, ku rid substrate halkaa. Ku jira weelashaas, meelo kala soocaan ferniga.
Waa muhiim! Ka dib markii transplanting, isla markiiba qoyan ciidda iyo caleemaha jilibka. Ku dhaji dheriyada meel hoy ah iyo meel diirran.
By buufin, waxaa lagula talinayaa in ay ku quudiyaan xididada. Daryeelka dhirta yaryar waa isku mid sida daryeelka ee shaybaarka dadka waaweyn.
Ha welwelin, haddii geedi socodka kobaca uu aad u dheeraado, waa wax caadi ah ferniga.
Ubax Venus waxay ku dhufan kartaa hab kale - dhirta. Doorashadan ayaa sidoo kale leh dhibaatooyin badan. Heerkulka qolka waa inuu ahaado qiyaastii 22 darajo oo ka sareysa eber.
Diyaarso ciidda sida kor ku xusan, hubi inaad ku darto ciid. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad hesho xaashida ugu weyn iyo caafimaadka ugu weyn. Hoosta waxay noqon doontaa lakabyo bunni ah oo yar - tani waa khilaafka.
Warqaddan waa in laga soocaa geedka, oo ka soo qaadaa dhammaan khilaafaadka.
Waa muhiim! DSi aad u nadiifiso carrada, waxaad ku diirin kartaa foornada ama kaliya digsi qaboojin.
Dheriga waa inuu ahaadaa substrate iyo dheecaan. Nadiifi ciidda, kadibna waxaad bilaabi kartaa inaad beerato. Looma baahna in la gooyo dhirta, kaliya ku rusheeyso dusha sare ee dhulka. Ka dib markaa, waxaad ku rusheey kartaa substrate yar oo sarre ah taasna waa.
Ku dabool weelasha foorno fuushan ama nooc quraarad ah si aad u abuurto saamiga aqalka dhirta lagu koriyo. Qolku waa inuu noqdaa mid diiran oo mugdi ku filan, laakiin marka caleemaha kowaad ay u muuqdaan, fur furaha dhirta oo u wareeji iftiinka.
Marka, ugu dambeyntii, sprouts waxay kordhisaa cabbirka yar yar iyo adkaanta, dooro kuwa ugu xooga badan iyo diyaarinta geedo. Waa inay jirtaa masaafada ugu yar ee 3 cm inta u dhaxeysa.
Daryeelka guriga ee dhirta
Muhiimada weyn ee daryeelka guriga ee timo jinsiga ah waa biyo waraabinta iyo bacriminta. Haddii adeerku ka baxo qalalan, macnaheedu waa inaadan si habboon u fulin nidaamyadan.
Biyaha ma aha mid aad u qabow oo aan kuleyl ahayn, waxaa fiican in la qaato dareeraha heerkulka qolka.
Adkeysiga heerkulka adigu waa adag tahay, sidaas darteed si aad u gaartid waxtarkan, qaboojinta biyo waa qiyaas ahaan saacad qolka. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro waqtigan waxay yeelan doontaa waqti ay ku degto.
Fursad aad u wanaagsan ayaa sidoo kale noqon karta isticmaalka biyaha roobka, taas oo hubaal ah inaysan laheyn waxyaabo waxyeello leh.
Looma baahna inaad u qaadato in tani tahay dhirta kulaylaha markaa waxay u baahan tahay waraabin xad dhaaf ah. Ma aha, si kastaba ha ahaatee, iyo uma baahna inaad u oggolaato dhulku inay aad u qalalaan. Haddii aad ka badan tahay, waxaad halis u tahay in la dilo qayb ka mid ah cawska geedka, iyo haddii aadan isticmaalin biyo kugu filan, waxaad ku dhufan kartaa qaybta dhulka hoostiisa.
Marka laga soo tago dhirta kuleylka ah waxaa sidoo kale jira: cordyline, feijoa, nepentes, jacaranda (geedka cirfiidka), aglaonema, clerodendrum, alokaziya, ciribtirka aechmea, guzmaniya iyo monstera.
Si aad u ogaato wakhtiga ay tahay inaad biyo ku shubto, ubax gacmahaaga ku taabasho. Haddii ay yar tahay la qalajiyey, macnaheedu waa wakhti.
Timaha Venus waa ubax u baahan quudin xilliyeed. Inta badan bacrimiya ciidda leh diirada ubaxa.
Waxaad ka soo qaadan kartaa dhar kasta oo lagu talinayo dukaanka xayawaanka. Ubaxa ma aha arrin lagu xallilo arrintan. Bacriminta Fern waa in la soo saaraa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Sida aad ogtahay, waxay ka socotaa geedka guga, iyo sidoo kale xilliga xagaaga. Samee nidaamka ku saabsan 1 jeer 20-30 maalmood.
Qaadista, sida dhalmada, qaybinta ama dhirta, waxay qaadataa gaar ahaan guga. Beereyaalku waxay xusuusinayaan in natiijada ugu wanaagsani la gaaro haddii sameeya sanadkiiba. Haddii aadan haysan waqti ku filan ama rabitaan ah, markaa waa laguu oggol yahay kaliya markaad fahamto in dheriga fermigu uu noqda mid cidhiidhi ah.
Xeerarku waa isku mid ah sidii loogu talagalay taranka taranka:
Ka saar dhirta laga soo bilaabo deegaankii hore.
Si taxaddar leh u nadiifiso asalka dhulka.
Ku rid dhar cusub.
Isla markiiba dhulka ku qoyso oo quudiyo.
Cayayaanka, cudurada iyo dhibaatooyinka kale
Daryeelka guriga ee timaha jinsiga ah kuma koobna biyo iyo bacrimin, waxaa muhiim ah in la hubiyo in dhirtu aanay xanuunsanayn. Inkasta oo aanay u qalmin in laga walwalo (fermiska marar dhif ah cayayaanka), waxaad weli u baahan tahay inaad ka ogaato khatarta suurtagalka ah.
Haddii aad ogaato in caleemaha u dhow bilowga bilowga inay huruud noqdaan, oo ay sii dheeraadaan dhererka oo noqda bunal, ka dibna kuwani waa calaamado in dhirta uu jiran yahay, sababtoo ah tubaakada, la'aanta biyo ama sababtoo ah hawo aan qumanayn.
Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato tallaabooyinkan soo socda: xir daaqada u dhow ubaxa ama qaad dheriga ka fog, kormeerida dhexdhexaadinta waraabinta iyo ubax ka saar beteriyada.
Haddii caleemaha ay ku dhow yihiin jaalaha oo kaliya yar yar oo u dhow ilaa dhamaadka, ka dibna hawo qalalan waa in lagu eedeeyo. Xaaladahaas oo kale, ubax ma siin doono caleemo cusub.
La yaab, laakiin haddii aad ku aragto caleenta caleen, waxay macnaheedu noqon doontaa in ay tahay waqtigii laga saaro ubaxa fog ee iftiinka.
Si aad u dardargeliso koritaanka aadka u yar, kordhiyo qiyaasta bacriminta.
Ma taqaanaa? Dalka Croatia, iyo sidoo kale Kanada, fern waa la ilaaliyaa, maadaama loo tixgelinayo warshad halis ah.
Marka nidaamka xididku uu bilaabo inuu kareemo, codsigii ugu horeeyay ee geedi socodkani wuxuu noqon doonaa caleen la'aan, inkastoo xaqiiqda ah in ciidda ay wali qoyan tahay. Si aan loo xallilin dhibaatada, waxaad u baahan tahay inaad qallajiso ciidda oo aadan u ogolaanin waraabka aan caddaaladda ahayn.
Laakiin haddii xididku horay u bilawday qallayl oo geeddi-socodka dib-u-dhicin, waa inaad ka saartaa meelaha waxyeellada leh iyo beerista ubaxa meel cusub.
Markaad bilowdo inaad ogaato in talooyinka caleemaha ay bilaabaan inay isku baddelaan, markaa waa waqtigii lagu abuuri lahaa xaalado nololeed oo raaxo leh oo loogu talagalay adantum - waa qabow.
Sababtoo ah ciidda cusbada leh, caleemaha ayaa laga yaabaa inay daboolaan dhibco madow. Xaaladdan, waxaad awoodi kartaa Isku bedel dhul kale.
Mid ka mid ah cayayaanka suurtagalka ah ee weerara warshad waa tuura. Waxaad arki doontaa in ay u muuqdeen markii aad aragto in caleemaha noqdaan naxaas. Haa, ferna lama daaweyn karo. Burburin geedka haddii kale, fayruska ku faafaya gawaarida ayaa sii socon doona.
Sida aad u arki karto, daryeesho qallafsanaan iyo jiljir leh ayuu u baahan yahay dadaal. Laakiin isku raac in ay dhamaantood u qalmaan si ay ugu raaxaystaan ​​ubax qurux badan ee adistum.